Orinasa telefaona finday Silika any Sina sy orinasa mpanamboatra | SJJ
Tranga finday silikônina dia endrika tsara hiarovana ny telefaoninao amin'ny rangotra, vovoka, fahatairana ary dian-tànana. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra izy ireo satria matanjaka sy mateza. Ny habe dia natao foana mba hifanaraka amin'ny maodely rehetra an'ny marika finday malaza, raha ny endriny sy ny loko kosa azo ahodim-pitia ...
Tranga finday silikônina dia endrika tsara hiarovana ny telefaoninao amin'ny rangotra, vovoka, fahatairana ary dian-tànana. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra izy ireo satria matanjaka sy mateza. Ny habe dia natao foana mba hifanaraka amin'ny maodely rehetra an'ny marika finday malaza, raha ny endriny sy ny loko kosa dia azo amboarina amin'ny logo isan-karazany mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Mamiratra sy mientanentana tokoa ny mampiasa telefaona misy sary na endrika tianao. Ny endrika sy logo maro loko dia manintona sy manintona kokoa ny telefaoninao. Ho an'ireo orinasan-marika, hevitra tsara dia tsara ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny telefaona finday amin'ny vidiny ambany ny dokambarotrao sy ny hevitrao.
Size: Ny haben'ny recessed habeny dia mifanaraka amin'ny haben'ny telefaona misy marika, ny habe sy endrika ivelany
Loko: afaka mifanitsy amin'ny loko PMS, ny fihodinana, ny fizarana, ny loko manjelanjelatra ary maivana kokoa
Attachment: Araho ny torolalana omenao
Teo aloha: Ny hafa
Manaraka: Fehin-kibo Silicone